प्राय: सोधिने प्रश्नहरू (FAQ'S)
१) शिपिंग र संग्रह
रिपोर्टहरू कति समय लाग्छ? Of र From हप्ता बीचको अर्डरको मितिबाट।
किट आउन कति समय लाग्छ? अर्डरको मितिबाट, २ and र the२ कार्य घण्टा बीचमा।
मैले पहिले नै मेरो नमूना स collected्कलन गरेको छु, म कसरी किट फिर्ता गर्ने? किट फिर्ता गर्न, तपाईले यसलाई यहाँ दर्ता गर्नुपर्नेछ र एउटा विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ: हुलाक डेलिभरी (यदि तपाईंको मेलिंग खाममा डाक टिकटहरू र हाम्रो ठेगाना छ भने तपाईंले त्यसलाई कुनै मेलबक्समा जम्मा गर्नुपर्नेछ) वा "स a्कलन तालिका गर्नुहोस्" यदि तपाईंसँग डाक टिकटहरू भएको झोला छैन। हामी तपाईंलाई संग्रहको लागि निर्देशन पठाउनेछौं।
के मैले मेरो किट मैले प्राप्त गरेको भन्दा फरक ठेगानाबाट पठाउन सक्छु? हो, तपाईंले भर्खर नयाँ संग्रह ठेगाना प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ जब तपाईं यहाँ आफ्नो किट दर्ता गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं स्पेनबाट पठाउनुहुन्छ भने तपाईंले नमूना र हस्ताक्षर गरिएको फारमको प्रतिलिपि कुनै पनि हुलाक कार्यालय वा मेलबक्समा छोड्नु पर्छ।
के म यसलाई उपहारको रूपमा किन्न सक्छु र कुनै ठेगानामा पठाउन सक्छु? हो, तपाईंले भर्खरको अर्डर नम्बर राख्नु पर्नेछ जुन तपाईं पुष्टिकरण ईमेलमा पाउनुहुनेछ र किट डेलिभर गर्न डेलिभरी ठेगाना प्रयोग गर्नुहोस्।
के तपाई कुनै देश पठाउँनुहुन्छ? हो, तपाईं विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर एक निश्चित र मान्य पोस्टल ठेगाना उपलब्ध गराउनु पर्छ।
किट ढुवानी गर्न कति खर्च हुन्छ? स्पेनमा, शिपिंग निःशुल्क छ। विश्वको बाँकी भागको लागि, संग्रह सेवाको साथ एक्सप्रेस शिपिंगको लागत २eयूरो छ र २25eयुरो भन्दा बढी अर्डरको लागि नि: शुल्क छ।
के म परीक्षा लिन अफिस जानु पर्छ? होइन, हामी तपाईंको किटहरू सित्तैंमा पठाउछौं। किटको प्रयोगको बारेमा विस्तृत निर्देशनहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ।
के म नमूना पठाउनु भन्दा पहिले विशेष अवस्थामा राख्नु पर्छ? होईन, नमूना कोठाको तापमानमा कम्तिमा3महिनाको लागि उत्तम अवस्थामा राखिन्छ।
त्यहाँ भुक्तानी को किसिमहरु छन्? स्पेनमा, क्रेडिट कार्डको साथसाथै पेपैल वा बैंक स्थानान्तरण (युरोपियन युनियनमा भुक्तानी विकल्पहरू), तपाईं डेलिभरीमा नगद भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। यूरोपियन युनियन बाहिर केवल क्रेडिट कार्ड वा पेपैलको साथ।
के म किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्छु? होईन, यो विकल्प अहिले सम्म उपलब्ध छैन।
के म कुनै प्याक किन्न सक्छु र केहि रिपोर्टहरू मेरो लागि र बाँकी अरू कसैको लागि गर्न सक्छु? होईन, प्रत्येक खरीद (रिपोर्टको संख्यालाई विचार नगरी) केवल एक व्यक्तिको लागि मान्य हुनेछ (DNA नमूना लिन केवल एउटा किट छ)।
शिपिंग लागत के हो? हामी कुनै पनि खरीदको साथ एक तर्फी शिपिंग समावेश गर्दछौं। संग्रह € २248 भन्दा बढी खरीदको लागि र € २25 below भन्दा कम खरीदहरूको लागि € २ of को लागतको लागि समावेश गरिएको छ।
)) प्रमाणका प्रकारहरू
के तपाईं पितृत्व परीक्षण गर्नुहुन्छ? होईन, २G जेनेटिक्समा हामी यस प्रकारको परीक्षण गर्दैनौं।
के तिनीहरूले रोगहरू पत्ता लगाउँछन्? होईन, हाम्रो रिपोर्टहरू निवारक छन्, हामी केवल आनुवंशिक जानकारीको एक अंश मात्र विश्लेषण गर्छौं (हाम्रो जीनोममा कुल 730.000,२०० मिलियन बायोमार्करहरू मध्ये करिब 3.200०,००० आनुवंशिक बायोमार्कर्स)। यदि तपाईं क्लिनिकल प्यानल खोज्दै हुनुहुन्छ भने रोग लाई पुष्टि गर्न वा रद्द गर्नका लागि, क्लिनिकल प्रयोगशालामा सम्पर्क गर्नुहोस्।
के उनीहरू Exome र Genome प्रदर्शन गर्छन्? हो, यदि तपाईं यी विकल्पहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (यो ईमेल ठेगाना स्प्याम बटहरू विरुद्ध सुरक्षित गरिएको छ। तपाईंलाई यो हेर्नको लागि जाभास्क्रिप्ट सक्षम हुनु आवश्यक छ।) सल्लाह र तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे विवरणको लागि।
यदि मैले गल्तीले किट किनेको छु भने के म फिर्ती अनुरोध गर्न सक्छु? हामी ढुवानी लागत र डेट किटको लागत बाहेक सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नेछौं, यदि रकम फिर्ताको अनुरोध नमूनाको अनुक्रमणिका अघि छ। यदि क्रम क्रम सुरु भएको छ भने हामी कुनै रकम फिर्ता गर्न सक्दैनौं। हामी ग्राहक सेवा टीमबाट कन्फर्मेसनको २१ व्यवसाय दिन भित्र मूल भुक्तानी विधि मार्फत फिर्ती जारी गर्नेछौं।
म कसरी फिर्ती अनुरोध गर्न सक्छु? तपाईंको फिर्ती प्रक्रिया गर्न, मा ग्राहक सेवा टीम मा सम्पर्क गर्नुहोस् यो ईमेल ठेगाना स्प्याम बटहरू विरुद्ध सुरक्षित गरिएको छ। तपाईंलाई यो हेर्नको लागि जाभास्क्रिप्ट सक्षम हुनु आवश्यक छ।.
)) प्याक र पदोन्नतीहरू
एन्स्ट्री + २ रिपोर्ट प्रस्तावमा म चाहेको दुई रिपोर्टहरू रोज्न सक्छु? हो, तपाईंले भर्खरै रिपोर्टहरू पठाउनु पर्छ जुन तपाईं किटको साथ प्रदान गरिएको फारमको "टिप्पणीहरू" क्षेत्रमा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। प्याकमा अनुरोध गरिएका रिपोर्टहरू व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गरिएको उस्तै हो।
सबै-इन-वन प्याकमा के समावेश छ? यसले हाम्रो सात पूर्ण रिपोर्टहरू, कच्चा अनुक्रमण डेटा फाईल, र निःशुल्क फोन परामर्श (प्रत्येक रिपोर्टको लागि १० मिनेट) समावेश गर्दछ।
)) वितरण र सम्बन्ध
म मेरो अभ्यास / कम्पनी मा आफ्नो परीक्षण बेच्न सक्छ? हो, हामीसँग साझेदारहरूको एक विस्तृत नेटवर्क छ। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यो ईमेल ठेगाना स्प्याम बटहरू विरुद्ध सुरक्षित गरिएको छ। तपाईंलाई यो हेर्नको लागि जाभास्क्रिप्ट सक्षम हुनु आवश्यक छ।.
के म तपाईंको ब्राण्ड लोगोको साथ तपाईंको किट बेच्न सक्छु? हो, हामीसँग पहिले नै केहि सेता लेबल केसहरू छन्, र यो विकल्प हो जुन तपाईं यसमा लेखेर परामर्श लिन सक्नुहुन्छ यो ईमेल ठेगाना स्प्याम बटहरू विरुद्ध सुरक्षित गरिएको छ। तपाईंलाई यो हेर्नको लागि जाभास्क्रिप्ट सक्षम हुनु आवश्यक छ।.
तपाईको ल्याबहरू कहाँ छन्? हाम्रो प्रयोगशालाहरू युरोपमा अवस्थित छन्। हाम्रो गोपनीयता नीति को कारण, हामी सही जानकारी साझा गर्न सक्दैनौं।
नाबालिगलाई परिक्षण गर्न सकिन्छ? हो, नाबालिगहरूको बारेमा तपाईंले हामीलाई आवश्यक कागजात (आईडी वा पारिवारिक पुस्तकको प्रतिलिपि) हाम्रो ईमेलमा पठाउनुपर्नेछ यो ईमेल ठेगाना स्प्याम बटहरू विरुद्ध सुरक्षित गरिएको छ। तपाईंलाई यो हेर्नको लागि जाभास्क्रिप्ट सक्षम हुनु आवश्यक छ।
के किटहरू ०--0 वर्ष उमेरका बच्चाहरूमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ? हो, बच्चाको मामलामा, नमूना स facil्कलन गर्न सहयोग पुर्‍याउन विशेष किट तयार गर्न हामीलाई अग्रिम सूचना दिनु आवश्यक पर्दछ।
के त्यहाँ गर्भवती महिलामा कुनै contraindication छ? होइन। रिपोर्ट फरक फरक हुँदैन।
के वंशज रिपोर्टले मलाई मेरा आफन्तहरू खोज्न मद्दत गर्दछ? तपाइँको कुनै पनि रिपोर्टको साथ तपाइँ तपाइँको अनुक्रम (कच्चा डेटा) को कच्चा डाटा फाइल प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाइँ मुफ्त उत्पत्ति.gedmatch.com जस्ता निःशुल्क वेबसाइटहरूमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, र, आफन्तहरूले पनि तपाइँको लगत अपलोड गरेको खण्डमा, तपाइँले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। सम्बन्धको बारेमा। २G जेनेटिक्समा हामी यस प्रकारको जानकारी प्रस्ताव गर्दैनौं।
के तपाईं कच्चा डाटा पठाउनुहुन्छ? हो, तपाईंले भर्खर हामीलाई ईमेल मार्फत सोध्नु पर्छ जब तपाईं आफ्ना रिपोर्टहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ।
मैले अर्को कम्पनीबाट मेरो रिपोर्ट खरीद गरें (पूर्वज, Myheritage, २andandme, dnafit, आदि), के म मेरो Raw डाटाबाट २G जेनेटिक्स रिपोर्टहरू किन्न सक्छु? हो, तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ.